सुर्खेतमा थपिए १५ कोरोना संक्रमित, मृतक युवकको रिपोर्ट नेगेटिभ - News Birat
सुर्खेतमा थपिए १५ कोरोना संक्रमित, मृतक युवकको रिपोर्ट नेगेटिभ
सुर्खेत, १५ जेठ-पछिल्लो २४ घण्टामा सुर्खेतमा थप १५ संक्रमित फेला परेका छन् । यो सँगै कर्णाली प्रदेशमा संक्रमितको संख्या ३८ पुगेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा पीसीआर परीक्षण गरिएकामध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका ७ पुरुष, ३ महिला, चौकुने गाउँपालिकाका २ महिला, १ पुरुष, सुदूरपश्चिमको बझाङ घर भएका ५५ वर्षीय १ पुरुष र पहिचान हुन बाँकी १ महिलामा गरी १५ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ ।
महाशाखा प्रमख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले नयाँ पहिचान भएका सबै सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राखिएको र उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताए । बझाङका ५५ वर्षीय पुरुष तथा बोल्न नसक्ने १ महिलाको ठेगाना पत्ता लगाउन प्रयास भइरहेको महाशाखा प्रमख तिवारीले बताए ।
मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लामा आरडीटी र पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन कार्य भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर ५ सय ५० आइसोलेसन, १७ भेन्टिलेटर रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा सुर्खेत र जुम्लामा गरिएको १ सय ६० पीसीआर परीक्षणमध्ये सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालको प्रयोगशालामा १५ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो ।
मृतक युवकको रिपोर्ट नेगेटिभ
भारत गुजरातबाट फर्कने क्रममा मंगलबार राती मृत्यु भएका सुर्खेतका १ युवकको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ । प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काका अनुसार मृतकको बुधबार स्वाब परीक्षणका क्रममा कोरोना नभएको पाइएको छ । आफन्तका अनुसार ती युवामा बाथ रोगसम्बन्धी समस्या थियो ।
बबईबाट वीरेन्द्रनगर आउँदै गर्दा बान्ता गर्न थालेपछि उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । कोरोना नदेखिएपछि अस्पतालले शव परीक्षण गरेर परिवारलाई बुझाउने छ । रासस
बिहीबार, १५ जेष्ठ २०७७, ११:५१ May 28, 2020 मा प्रकाशित